बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनका बाउ छोरालाई कोरोना पोजेटिभ, अस्पताल भर्ना” – Life Nepali
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनका बाउ छोरालाई कोरोना पोजेटिभ, अस्पताल भर्ना”
काठमाडौं . कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना भएका छन्। बच्चनलाई मुम्बईस्थित नानवती अस्पताल भर्ना गरिएको इन्डिएन एक्सप्रेसले लेखेको छ। बच्चनले परीक्षणका क्रममा आफूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी फेसबुक तथा ट्विटरमार्फत् गराएका छन्। उनले विगत १० दिनयता आफूसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई परीक्षण गराउन समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत् आग्रह गरेका छन्। नानवती अस्पतालका एक चिकित्सकले समेत उनी कोरोना पोजेटिभ भएर अस्पताल भर्ना भएको पुष‍्टि गरेका छन्।
‘कोरोना पोजेटिभ भएर बच्चन राती १० बजे अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनको अवस्था सामान्य छ। उनको विस्तृत स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाउन आवश्यक परीक्षण जारी छन्,’ भारतीय समाचार माध्यम द हिन्दूसँग कुराकानी गर्दै ती डाक्टरले भनेका छन्। गत महिना मात्र अमेजन प्राइम भिडियोमा रिलिज भएको गुलाबो सिताबोमा ७७ वर्षीय बच्चनसमेतको अभिनय छ। उनको रोल भएको यो पछिल्लो सिनेमा हो। उनका छोरा अभिषेक बच्चनलाइ पनि कोरोना पोजेटिभ भएको बताइएको छ। अभिषेकलाई पनि सोहि अस्पतालमा राखिएको छ।
अभिताभ बच्चनले आफुलाई कोरोना संक्रमण भएकोले अस्पतालमा भर्ना भएको सामाजिक संजालमा लेखेका छन्। जया बच्चन र ऐश्वर्या राय बच्चनको पनि कोरोना परीक्षण गरिएको छ। उनीहरुको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको महाराष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्री राजेश टोपेले बताए। अभिताभले वितेका १० दिनमा आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई कोरोना परीक्षण गराउन भनेका छन्। अभिषेकले एक ट्वीट गदै मुम्बई नगरपालिकाको सम्पर्कमा रहेको र सबै सावधानिको उपायहरु पालना गरिरको बताएका छन्। उनले कोरोनाको सामान्य लक्षण देखिएको बताएका छन्।अधिकारीहरुका अनुसार अमिताभमा भने कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको छैन। ७७ वर्षिय अभिताम ५ दशकदेखि बलिउडमा सक्रिय छन्।
Previous Breaking news : भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि !
Next सार्वजनिक सवारी कहिले सन्चालनमा आउछन त ? यस्तो छ महासंघको तयारी –